हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर हुन्छ - Wnepal.com
ज्योति प्रकाश पाण्डे, सीइओ, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड
ज्योति प्रकाश पाण्डे चिनाई राख्नुपर्ने नाम होइन । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिब तीन दर्शक विताएका पाण्डे नेपालकै ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
अहिले कजारमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच बिग मर्जरको कुरा छ । यस सम्बन्धमा के प्रगति भयो । मर्जरको आवश्यकता किन ? मर्जरपछि तपाईको पोजिसन के हो ? यी आदि विषयमा सीइओ पाण्डेसंग गरेको कुराकानीका केही अंशः
० सीइओ साब हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड बीच मर्जर हुने कुरा चाहि कहाँ पुग्यो ?
हामी बीच मर्जर हुन्छ । नेपालमा ठूलो बैंकको आवश्यकता छ । धेरै कुरामा अगाडी हामी बढि सकेको अवस्था छ । मर्जर देशकै आवश्यकता हो । पारिवारिक कुरा होइन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
० मर्जर बारे केही कुरा नमिलेको भन्ने हल्ला बजारमा छ नि ?
हल्लाको पछाडी हामी लाग्दैनौ । कसैलाई मर्जरको बारेमा चित्त नबुभेको पनि होला । मर्जर भाँड्न लागि परेका पनि छन् होला । तर, राम्रो कुरा गर्दा राम्रो सोच राख्नु जरुरी छ होइन र ?
० मर्जर पछि तपाईको सीइओ पद त गुम्ने भयो नि होइन र ?
पद र प्रतिष्ठ भन्ने कुरा समयले दिने हो । देशकै ठूलो वाणिज्य बैंक बनाउने कुरामा पदको बारे सोच्नु गलत होला । म दोस्रो मेन भएन बस्ने कि नबस्ने मेरो कुरा होला । तर मर्जर भाँड्ने, नभएका कुराको प्रचार प्रसार गर्नु चाहि राम्रो पक्ष पक्कै होइन ।
० हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंको मर्जर ढिलो हुनुको कारण चाहि के होला ?
एउटा कोरोना कहरले केही ढिला भएको चाहि पककै हो तर, सबै काम भइरहेको छ । जसरी पनि मर्जर हुन्छ । नेपालमा ठूलो बैंकको आवश्यकता भैसक्यो । एउटा होइड्रोपावरलाई कर्जा दिँदा ४/५ वटा बैंकले दिनु पर्दछ । ठूलो बैंक भएपछि ठूला कर्जा दिन सकिन्छ । सबै कुरामा राम्रो हुन्छ नि ।
० नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको शाखा रहेका राजदरवार अगाडीको भवनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भनिन्छ कुरा के हो ?
यो कुरा यस्तो हो । १५/२० वर्ष अगाडी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एसबीआई बैंक लगायतका बैंकहरुले कर्जा दिएर लिलामी प्रकाशन गरेपछि हामीले त्यसबेला ३१ करोडमा विट गरि लिएको सम्पत्ती हो । हामीकहाँ दिवाकर चन्दजीको कुनै कर्जा छैन । त्यसबेला नबिल बैंकले २१ करोडमा बीट गरेको थियो । हामीले बढि मुल्यमा बीट गरेपछि बैंकले किनेको सम्पत्ती हो । सबै हल्ला मर्जर भाड्नकै लागि प्रचार प्रसार गरिएको देखिन्छ । तर, कुनै पनि हालतमा मर्जर भाडिदैन । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । तपाई पत्रकार मित्रहरु हल्लाको पछाडि लाग्नु प¥यो नि ।
कर्जा डिफल्ट भयो १०० प्रतिशत प्रभिजन भएको छ केहि पैसा उठेको छ, सम्पत्ती विक्री हुने प्रक्रियामा छ सबै पैसा उठ्ने छ । त्यो अब बैंकहरुको नाफामा जान्छ । त्यसकारण अत्तिनु पर्ने कारण छैन भूपेन्द्रजी । अर्को चितवन मेडिकल कलेजको कुरा के छ भने कर्जा दिएको हो किस्ता आएको छ प्रभिजनिङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनसम्म छैन ।
० सीइओ साब अरु केही कर्जा डिफल्ट भएको भनिएको जस्तो पर्साको कोइला आर्यात कम्पनी र चितवन मेडिकल कलेजको यसबारे सत्य तथ्य के हो ?
बैंकले नाफा कमाउने कर्जा नै दिने हो । हामीले कर्जा दिएका छौं । पर्साको कोइला आर्यात कम्पनीलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायत केही बैंकले कर्जा दिएको सत्य हो । कर्जा डिफल्ट भयो १०० प्रतिशत प्रभिजन भएको छ केहि पैसा उठेको छ, सम्पत्ती विक्री हुने प्रक्रियामा छ सबै पैसा उठ्ने छ । त्यो अब बैंकहरुको नाफामा जान्छ । त्यसकारण अत्तिनु पर्ने कारण छैन । अर्को चितवन मेडिकल कलेजको कुरा के छ भने कर्जा दिएको हो किस्ता आएको छ प्रभिजनिङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनसम्म छैन ।
गल्ती भए कारवाही गर्दछ होला । त्यसकारण गलत कुरालाई समचार बनाएर मर्जर भाँड्ने काम तपाई हामी कसैले गर्नु हुन्दैन । चितवन मेडिकल कलेजमा हजारौ विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन् । कर्जा डुब्यो भनेर तपाईले भन्दा हुन्छ र त्यसकारण हल्लाको पछाडी लाग्नु हुदैन । यथार्थ के हो ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ नि होइन र ?
यो असल कर्जा भित्र नै छ । त्यसकारण मान्छे भाग्यो, भारतीय ग्राहक हो भनि हल्ला चलाएर बैंकको बदनाम गराउनु गलत कार्य हो । यो बन्द हुनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले पनि त निरिक्षण गरेको होला । गल्ती भए कारवाही गर्दछ होला । त्यसकारण गलत कुरालाई समचार बनाएर मर्जर भाँड्ने काम तपाई हामी कसैले गर्नु हुन्दैन । चितवन मेडिकल कलेजमा हजारौ विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन् । कर्जा डुब्यो भनेर तपाईले भन्दा हुन्छ र त्यसकारण हल्लाको पछाडी लाग्नु हुदैन । यथार्थ के हो ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ नि होइन र ?
० अन्त्यमा मलाई भनिदिनु होस् हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच मर्जर कहिलेसम्म हुन्छ त ?
मैले अगाडी नै भनिसके नेपालमा अब ठूलो वाणिज्य बैंकको आवश्यकता भैसकेको छ । मर्जर केही महिना भित्र हुन्छ । ठूलो बैंक पनि हुनछ । काम भइरहेको छ । कसैलाई मर्जर नहोस् भन्ने पनि होला । तर, समयको आश्यकताले नै मर्जर गराउने हो । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक नेपालकै ठूलो वाणिज्य बैंक् बन्ने कुरामा अब चाहि दुई मत छैन । (आर्थिक बजार न्यूज डटकमबाट साभार गरिएको)
सरकारी वेथिती बेरुजुमात्र ४ खर्ब १८ भन्दा बढी (प्रतिवेदन सहित)
डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य फेरि बढ्यो